NoMsunduzi uyibambile ulwa ngculaza – Msunduzi News
Ukuba khona kwesandulelangculaza kubantu eNingizimu Afrika sekwenyukele emaphesentini ali-13.1, ngokwezibalo ezikhishwe uSoszibalominingwane Jikelele uRisenga Maluleke phakathi nonyaka.
“Abantu abanesandulelangculaza ngowezi-2018 babalelwa ezigidini eziyisi-7.52 (7 520 000). Yebo sibheka abantu abaphila kahle. Ngokwanda nangokutholakala kwama-ARV, baningi abantu abanesandulelangculaza ngakho-ke akusilo udaba lokuthi isibalo siyakhuphuka. Vele bakhona abathelelekayo kumanje, iqiniso lithi abantu baphila isikhathi eside besebenzisa ama-ARV. Uma kulokhu kuqhubeka isikhathi abantu abaminyaka isukela kwengama-25 kuya kwengama-49 isibalo siyakhula kanti kwabaphakathi kweli-15 kuya kwengama-24 siyancipha,” kusho uMaluleke
Isibalo sababulawa okuphathelene nengculaza siya ngokwehla sisuka ezi-276 921 ngowezi-2007 kuya ezi-115 167 ngowezi-2018. Le nkulumo nalezi zibalo zisho khona ukuthi impi yokelwa nengculkazi kanye nesandula sayo isemqoka nokuthi uma kubanjiswene, uHulumeni kanye nomphakathi, iyodudulwa. EMsunduzi bakhona abantu nezinhlangano abasekhaleni lempi. Ngokwemibiko ehlinzwekwe uMnyango Wezempilo esifundazweni saKwaZulu-Natal, usuhlinzeke ngamakhondomu abantu besilisa alinganiselwa ezi-16 666 546, kube ayizi-241 297 abantu besifazane, esabelweni sezimali sonyaka wezi-2017/18 kuMasipala uMsunduzi uwodwa. Abantu abaqale imishanguzo wegciwane lesandulelangculaza eMsunduzi ngonyaka wezi-2017/18 balinganiselwa ezi-17 495.
Njengengxeye yokuthola ngezinhlelo ezikhona iMsunduzi News ixoxe noMnu u-Isreal Ndlovu oyi-Outreach Programme Manager enhlanganweni elekelela abantu abahaqwe yingculaza nesandulela sayo, i-Essa Christian Aids Programme (ECAP). Ephawula ngesidingo sokusebenzisa phakathi kwalabo abasempini yokulwisana nesifo uthe: “Ngeke sithi sisebenza ngomuntu oyedwa emphakathini uthole ukuthi asazani ukuthi senzani, i-ECAP ayazi ukuthi uMsunduzi wenzani, kanti noMsunduzi awazi ukuthi i-ECAP yenzani, ” kuphawula uNdlovu.
Uveze ukuthi njengenhlangano umphakathi waseMsunduzi bawulekela ngenzindlela eziningi njengoba benezinhlelo ezine zosizo. Phakathi kwalezi nhlelo uveze i-Adherence Club, laba abantu abaphila nesifo bethatha imishanguzo bengamaqembu, uma kungukuthi uyasebenza uthatha imishanguzo emaqenjini, ungayi ukuyobamba imigqa emide yokulanda imishanguzo emitholampilo. UNdlovu uthe, “Nawo amaqembu ayafundisa ngezempilo, iziguli ziyakuthola ukuchazelwa ngezihloko ezithize zempilo.”
Olunye uhlelo lubizwa ngesupport group la kunxenxwa abantu ukuthi bahlangane bakhe inhlangano yalabo asebezazi ukuthi baphila nohlobo oluthile lwesifo, la bezoqhamuka namasu okuthi bangenzenjani ukwenza izinto ezizongenisa imali ezibizwa ngama income generating projects. “Kunezinhlangano esezenze izinsipho zokuwasha izitsha nopholishi. Kube nenhlangano iMasakhane Development Centre eThembalihle eduze kwase-Eastwood enqume ukuthi ithole ikoyi lokuthungela imifaniswano yesikole, idayiswe, baphinde batshale nezitshalo,” kusho uNdlovu.
Olunye uhlelo olubizwa ngeChurch Leaders Group Dialogla kufundiswa abefundisi ngesifo sengculazi nesandulela sayo. “Kunamabandla amane esesiwaqeqeshile ngodaba lwesifo sengculazi njengoba ingculazi ibingamukeleki kahle phambilini emabandleni, bekunomukhuba wokusola umuntu onengculazi ukuthi kungenzeka ubengaziphathanga kahle. Sifundisa abefundusi ukuthi abakhanyiseleke ngalesi sifo,” kusho uNdlovu. Uqhube wathi namabandla awazihlele enze amabusiness plan ukuze ezokwenza izinto ezizongenisa imali, naveze ukuthi abanye sebenqume ukufuya izinkukhu ezikhiqiza amaqanda, abanye banqume ukuhlobisa uma kunemicimbi endaweni.
Uhlelo lokugcina lwenhlangano lubizwa ngeBack to School Programme, lapha uNdlovu uveze ukuthi ila bake bacele othisha ezikoleni ukuthi bakhombe izingane ezidinga imifaniswane yesikole, uma sezitholakele inhlangano izitholela umfaniswano zikwazi ukufunda kahle ngoba ziyazenyeza uma zingafani nezinye izingane ngenxa yokuphelelwa ukuzethemba. Phakathi kwezikole esezihlomulile kulolu hlelo, kubalwa i-Ashdown Primary School.
“Inhlangano i-ECAP iqale eMgungundlovu ngonyaka we-1997, yaqala ngokuthi iye emabandleni icela amalungu esonto ukuthi azoqeqeshwa ngokohlelo olubizwa ngokuthi iHome Base Care, i-ECAP yasebenzisana namabandla angaphezu kwe-160 e-Pietermaritzburg. Ngalolu hlelo lweHome Base Care sasihlose ukulekelela abantu asebegula kakhulu. La e-Maritzburg kunezindawo ezifana noDambuza ezinabantu abasuka eMatatiela nakoLesotho bezofuna umsebenzi, uthole ukuthi umuntu uhlala yedwa uma esegula akasekho umuntu ozomusiza ngoba izihlobo zakhe zikude, ilapho amabandla ayengelela khona,” kusho uNdlovu.
“Inhlangano i-ECAP isisize amalungu amasha abengenelela kuma-Adherence Club. NgoMbasa isize abantu abayizi-2285, ngoNhlaba abayizi-2750, ngoNhlangulana abayizi-3081, ngoNtulikazi abayizi-3328, ngoNcwaba abayizi-3563, kwathi ngoMandulo abayizi-3753,” kusho uNdlovu.
Echaza ngosizo oluhlinzekelwa lwabantu okunzima ukwamukela ukuthi baphila nesifo sengculaza, uNdlovu uthe :“Thina njengo-ECAP sibanikeza ukwaluleka (basic counselling), ukuze umuntu akwazi ukwamukela, uma kuwukuthi akuvumi azamukelele eyedwa uyakhuthazwa ukuthi akangenele ama-support group aseduzane naye. Kulula uma sewuhlangene nabanye abantu abanalesi sifo ngoba uthola nomuntu ozokutshela ukuthi naye wayenenkinga efanayo wasizakala kanjani. Nokwenza kube lula ukuthi umuntu agcine amukela,” kubeka uNdlovu.
Ekulekeleleni abantu aseyiyekile imshanguzo uveze ukukhathazeka kwakhe kepha wabe esekhuluma ngohlelo thizeni olukhona . “ Kunohlelo esilwenzayo ezinhlanganweni ezingaphansi kwethu kulabantu ababizwa ngokuthi oLost to Follow, kunabantu abajutshelwe ukusebenza ezikhungweni okuyibona abalandelelayo ukuthi kungani uyekile ukudla imishanguzo, ngoba isikhathi esiningi bayaphuma ngisho ezinhlanganweni abasuke bezingenelile. Bake balulekwe nangokomqondo ngoba abanye uthola ukuthi bacindezelekile,” kusho uNdlovu
UNdlovu uveze ukuthi i-ECAP amaqoqo (cells) ezilekelela abantu abanesifo sengculazi, e-Taylors angama-23, e-Willowfontain ali-12, e-Azalia angama-28, eSondelani ali-12, e-Snathing angama-21.Inhlangano i-ECAP isezinhlelweni zokuthola izimali njengoba kuyinhlangano kazwelonke, isicele imali eMnyangweni Wezempilo kaZwelonke njengoba kungu mnyango umxhasi omkhulu wenhlangano. UNdlovu uthe, “Ukushoda kwemali kuphoqelele ekutheni kumiswe izinhlelo ezikwezinye izifundazwe kanye nakwezinye izindawo ezisesifundazweni saKwaZulu-Natal.”
Nakulokhu iNhlokodolobha ingusokhaya ofanele
Previous post: UMasipala yikhaya labo bonke abantu
Next post: UMsunduzi uzinikele ukuthi kuthunywe wona